Kupihwa kwegore remahara kweApple TV + kwakaderedzwa kusvika mwedzi mitatu | Ndinobva mac
Apple TV + yegore rimwe kupihwa yemahara inoderedzwa kusvika mwedzi mitatu
Kusvika nguva pfupi yadarika, chero munhu akatenga chimwe chezvigadzirwa zvakasarudzwa neApple, akawana mukana wekugona kunyoresa kwegore rimwe kuApple TV + mahara. Naizvozvi, kambani iyi yakakwanisa kukwezva vakawanda vangangobhadhara vanyorese pavaka "kochekera" zvakateedzana. Apple yaifanirwa kunge yaifunga zvirinani nezve yekutengesa nzira nekuti kupihwa Ikozvino yakadzikiswa kusvika pamwedzi mitatu.
Vatengi vezvigadzirwa zveApple vacharamba vachiwana muedzo wepachena weApple TV +, zvisinei, nguva yekunyoreswa kwemahara ichatapudzwa kubva pagore kusvika kumwedzi mitatu. Kutanga 1 Chikunguru 2021, vashandisi vanotenga Apple chishandiso chakasarudzwa neApple vanogashira mwedzi mitatu yeApple TV + mahara. Ndiyo yekutanga shanduko muchipo chekuyedza kubvira payakaburitswa pamwe chete neyekutanga Apple TV + kuvhurwa mu2019.
Mushure mekuyedzwa, vashandisi vanobhadhara yakatarwa pamwedzi fizi kuti vawane yepakutanga uye isiri-yepakutanga Apple zvemukati. Naizvozvo, vashandisi vakatenga iPhones, iPads, kana zvimwe zvishandiso zveApple pakavhurwa Apple TV + Ivo vakakwanisa kuvaona mahara kusvika yapfuura Mbudzi 2020.
Zvino, Apple yakazowedzera kusimudzira uku kusvika Kukadzi 2021. Zvaifungidzirwa kuti Apple yakazviita zvekuti kunyangwe ivo vekutanga vashandisi vaigona kutevera muyedzo yemahara apo mwaka wechipiri wezvirongwa zvayo wakatanga kubuda. Vamwe veavo vekutanga kunyoresa vanga vatochinjirwa kune yakabhadharwa vhezheni. Manzana akaburitsa mari kune avo vashandisi.
Parizvino uye chinguva chidiki kusati kwapera, Apple yakachiwedzera zvakare. Ino nguva yekuedzwa nguva, kunyangwe kune vekutanga kunyoresa, yaizovatora kusvika kupera kwaJune 2021. Isu tinofungidzira kuti Apple inoda kuti varambe vachinakidzwa neApple TV +, zvinogona kunge yaive nzira yekupa nyasha kune avo vatengi vanovandudza zvigadzirwa zvavo gore rimwe nerimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Apple TV + yegore rimwe kupihwa yemahara inoderedzwa kusvika mwedzi mitatu
Tim Cook anotaura nezve kuvanzika mune vhidhiyo yekambani nyowani